स्वास्थ्य Archives - Page4of 180 - Purbeli News
रौतहट / डा. गोविन्द केसी बाढी प्रभावितको स्वास्थ्य जाँच गर्न रौतहटको भावित ईशनाथ नगरपालिकाको बन्जरहा पुगेका छन् । शुक्रबारदेखि बन्जरहाको स्वास्थ्य चौकीमा आएका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा. डा. केसीले विरामीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका छन् । बाढीबाट प्रभावित बस्तीमा झाडा पखालासँगै भाइरल ज्वरोलगायतका रोग देखापरेको उनले बताए । बाढी आएको नौ दिन...
थापाथली / थापाथलीस्थित प्रसूती गृहमा सुत्केरी गराउन भर्ना भएकी नुवाकोट दुप्चेकी ३८ वर्षीया कल्पना तामाङको मृत्यु भएको छ। सुत्केरी गराउन गएकी आमा र बच्चा दुबैकाे मृत्यु भएपछि अस्पतालमा तोडफोड भएको छ । अस्पतालको हेलचेक्रयाइका कारण आमाको मृत्यु भएपछि आफन्तले आराेप लगाएका छन् । शल्यक्रिया गर्नु पर्ने भन्दै मंगलबार अस्पताल भर्ना गरेको तर बुधबार ए...
काठमाडौँ / प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले बाढी, पहिरो र डुबान क्षेत्रमा विभिन्न रोग महामारीको रुपमा फैलने सम्भावनालाई नियन्त्रण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । काङ्ग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले आज जारी एक विज्ञप्तिमार्फत बाढी, पहिरो र डुबान क्षेत्रमा थप मानवीय क्षति हुन नदिन सरकार र सम्बन्धित निकायलाई सशक्त एवं गतिशील रुपमा कार्य गर्न आग्रह ग...
यो मौसममा धेरै प्रकारका सर्पहरु देखिने गर्छन् । हामीले सर्प चलाउने जिस्काउने गर्नुहुँदैन भने सर्पले डसेको खण्डमा बिरामीलाई सुताउने त्यो स्थान चलाउनु हुँदैन । शरीरमा खुला कपडा लगाउने र डसेको भागमा चुस्ने, काट्ने गर्न आदि गर्नुहुँदैन । सर्पले टोकेमा के गर्ने ? - सर्पले डसेमा तुरुन्त सुताउने । - एक औँला छिर्नेगरी अलिक माथि बाँध्ने । - चा...
अमरगढी / केही दिनदेखि आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा ठप्प रहेको डडेल्धुरा अस्पताल आजदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ  । काममा खटिएका चिकित्सकमाथि आक्रमण भएको विषयलाई लिएर अस्पतालका चिकित्सकले यही असार २५ गते बुधबारदेखि डडेल्धुरा अस्पतालको आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेका थिए । बहिरङ्गलगायत सबै सेवा बन्द गरी सुरक्षाको माग गर्दै ११ जना चिकित्सकले मुख्यम...
बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा रोगको जोखिम बढेको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हेपाटाइटिस ‘ए’ ‘ई’, टाइफाइड, डेंगु, मलेरिया, हैजा, झाडापखाला, कीटजन्य रोग, लेप्टोस्पिरोसिस ब्याक्ट्रोरीया लगायतका रोग लाग्न सक्छ । लेप्टोस्पिरोसिस ब्याक्टेरिया प्राकृतिक प्रकोपको बेला धेरै सक्रिय रहन्छ । लेप्टोस्पिरोसिस ब्याक्टेरियाले के गर्छ ? लेप्टोस्पिरोसिस ब्याक्ट...
इटहरी । पछिल्लो समय हृदयघात अर्थात् हर्टअट्याकले धेरै मानिसहरुको ज्यान लिन थालेको छ । काठमाण्डौ बसुन्धाराकी ५० बर्षि अम्विका श्रेष्ठको र्हदयघातकै कारण मृत्यु भएको छ । घरयासी कामकै सिलसिलामा अम्विकाको मृत्यु भएको मृतक अम्बिकाको आफन्त अशोक श्रेष्ठले बताएका छन । हृदयघातको कारण गत २७ गते शुत्रबार मृत्यु भएको हो । अम्विकाको दुई छोरी छन । छोरी विदेशम...
निजी मेडिकल कलेजलाई बन्देज लगाउनुहुँदैन : उप-प्रधानमन्त्री यादव
काठमाडौँ / चिकित्सा शिक्षा ‘उपचार शिक्षा’ भएकाले यसलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउन माग गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा सेवा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत हुँदा प्रभावकारी समन्वयको अभाव रहेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक अंश एक मन्त्रालयमा अर्काे अंश अर्काे मन्त्रालयमा रहँदा उपलब्धि कम देखिएको जनाएको छ...
पृष्ठभुमीः लेप्टोस्पाइसीस पशुबाट मानीसमा सर्ने बढी प्रचलीत जीवाणुजन्य रोग मानीन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले उष्ण हावापानी भएको यो रोग कमै चासोमा पर्ने रोगका रुपमा पहिचान गरी यस्को विस्तृत प्राज्ञिक अध्ययन अनुसंधान एवं अभीलेखीकरण गर्नु पर्ने भनी औल्याइएको छ । यस रोगको स्थिती विश्वव्यापी रहेको मानिन्छ, जसले गर्दा यस रोगबाट बर्षेनी ३००००० देखि ५००००० ...
काठमाडौं / कानमा लाग्ने रोग हेर्दा साधारण लागे पनि समयमै उपचार भएन भने यसले अन्य अंगमा पनि असर गर्न सक्छ । कानमा देखिने समस्या मध्ये सबैभन्दा धेरै कान पाक्ने समस्या हो । जुन सुकै लिङ्ग, उमेर समुहका मानिसमा यो समस्या देखिन सक्छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा कान पाक्ने समस्या अझ धेरै छ । कानको बनावट हेरेर ३ भाग (बाहिरी ,मध्य र भित्री) मा विभाजन गरि...